Ny fandaharana tsara indrindra hanovana sary: ​​solony ho an'ny sarinao | Famoronana an-tserasera
Ny programa tsara indrindra hanovana sary
Encarni Arcoya | 28/03/2021 20:44 | Nohavaozina amin'ny 28/03/2021 20:54 | dia midika hoe
Androany ny andian-teny hoe "sarobidy ny sary iray arivo" dia zavatra iray izay manerantany. Ankehitriny dia ataonay laharam-pahamehana ny zavatra hitantsika mihoatra izay vakintsika; ny tambajotra sosialy dia natokana ho amin'izany, ary izany hoe, ny horonan-tsary sy sary dia mirona ankehitriny. Ka, Ny fananana programa hanovana sary dia zavatra iray izay tsy banga amin'ny solosaina, tablette na finday mihitsy aza.
Te ho tonga lafatra amin'ny sary ny olon-drehetra ary noho izany dia tsy misalasala mamerina ny sary izy ireo, indraindray mahazo valiny izay tsy mitovy amin'ny tena izy mihitsy. Fa ny sary no zava-dehibe ankehitriny. Noho izany, hijery ny programa tsara indrindra izahay hanovana sary, sady karama no maimaim-poana, mba hanananao safidy ahafahanao mandany ora maro hanatsarana ny sarinao.
1 Program ho fanitsiana sary
1.6 Rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra: Canva
1.8 Rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra: Snapseed
1.10 Rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra: Adobe Photoshop Express
Program ho fanitsiana sary
Ny siansa momba ny solosaina dia lohahevitra izay tsy fehezin'ny rehetra amin'ny ambaratonga mitovy. Misy ireo izay miaro tena tsara kokoa amin'ny alàlan'ny programa sasany noho ny amin'ny hafa, izay te-manandrana zava-baovao isaky ny mandeha, na aleony ny fampiharana an-tserasera na tranokala manitsy sary.
Noho izany, eto dia hanome anao a fifantenana ireo programa hanovana sary izay anananao ary afaka misafidy hampiasaina, na farafaharatsiny manandrana. Iza amin'ireo no hotehirizinao?
Miala tsiny, fa tsy maintsy atomboka amin'ny programa izay be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao ataon'ny mpanonta sary maro, na matihanina na mpampiasa. Izy ve programa kintana hanovana sary Ary tsy vitan'ny hoe manao izany izy, fa mamela anao mamorona sary, sary, mamerina azy ireo indray, manova loko, fiaviana, mamafa, manampy ary maro hafa.
Mamela ny fiasa amina endrika sary marobe, tsy ny mahazatra ihany, ary koa amin'ny sosona samihafa, amin'izay ny zavatra ataonao amin'ny iray dia azo taratra, na tsia, amin'ny valiny farany. Ny olana fotsiny dia programa misy karama io.
GIMP no antsoin'izy ireo hoe "safidy Photoshop akaiky indrindra." Ary io dia tena itovizany sy matihanina toy ny iray hafa (ary misy aza milaza fa tsara kokoa). Na izany aza, sarotra ny mampiasa azy, ary tsy mora ny mianatra, tahaka ny mitranga amin'ny Photoshop. Raha atao teny hafa, dia mila mampiasa fampianarana video marobe ianao mba hianaranao mitovy amin'ny programa hafa.
Raha ny toetra mampiavaka azy dia afaka manao zavatra mitovy amin'ny Photoshop ianao, fa maimaim-poana, satria programa azonao sintonina ho an'ny Windows, Mac na Linux tsy misy olana.
Ireo izay mampiasa Paint dia azo antoka fa hahatadidy ilay programa amin'ny andro voalohany. Nahafinaritra ny nanao zavatra fototra, anisan'izany ny fanovana sary; saingy tsy afaka nanontany be loatra momba izany ianao. Na izany aza, nanjavona avy tao Windows izy mba handeha amin'ny làlan-kalehany. Noho izany, manana Paint Shop Pro isika, a Solosaina amin'ireo programa fanovana sary izay azo aseho ho an'ny olona manana fahalalana antonony na matihanina.
Ao amin'ny Windows ihany izy io ary misy zavatra tsy ananan'ny hafa, toy ny HDR na ny fanekena ny tarehy.
Ity dia programa fanovana sary hafa izay mifaninana amin'ny Photoshop sy GIMP. Raha ny tena izy, raha ny filazan'ny mpamorona azy dia ny fanoloana programa misy karama no sady manome ny endrik'ireo rehetra ireo.
Ny fandaharana dia miorina amin'ny fitsaboana ny sary, fa azo ampiasaina amin'ny famerenana indray.
Raha tsy dia mora ampiasaina amin'ny programa fanovana sary ianao dia mety tsy mila programa tsara hanaovana zavatra telo na efatra amin'ny sarinao. Noho izany, handeha isika amporisiho ity mpamoaka sary ity, mety satria manana menio fototra sy tsotra izy, mora be ampiasaina ary na dia tsy azo ampitahaina amin'ny programa voalohany aza, ny marina dia manana asa matihanina kokoa izy, toy ny fampifangaroana sary HDR, ny fampiasana sosona, sivana, vokany sns.
Rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra: Canva
Raha toa ianao ka mampiasa programa hanovana sary an-tserasera kokoa, na satria ny sary averinao jerena dia nalaina avy amin'ny banky sary na satria tsy te-hametraka na inona na inona ao amin'ny solosainao ianao, Canva no iray amin'ireo safidy tsara indrindra.
Este miasa amin'ny Internet ny programa ary mamela anao hanao saika ny zava-drehetra amin'ny sary: amboary ny famirapiratany, ny voly, ahodino na atodiho izy ireo, asio sivana, ampio kisary ...
Ankehitriny, manana fiasa na sary ary modely vitsivitsy ianao izay aloa. Saingy misy maro ny maimaim-poana ary manana banky sary misy azy an'arivony izy ireo, ary koa modely voamarina mialoha ho an'ny fampiasana maro.
Ny iray hafa mifaninana amin'i Canva dia ity, Pixlr, miavaka amin'ny fananana sticker, endritsoratra, sivana, vokatra maro ... Ny zavatra tsara indrindra dia maimaim-poana ary afaka misafidy mpamoaka lahatsoratra samihafa ianao, mifototra amin'ny hoe mila fitaovana matihanina kokoa ianao na latsaka .
Ary koa, amin'ny lafiny fanovana, mahomby io ary mahafaly ny ankamaroan'ny filànao hanananao: manitsy ny famirapiratana, ny voly, mamafa ny fiaviany, ampio sivana sns.
Rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra: Snapseed
Andao hiresaka momba ny rindranasa findainao na ny takelaka misy anao izao. Ity dia iray amin'ireo programa fanovana sary be mpampiasa indrindra, satria miasa be dia be izy io ary miaraka amina hetsika vitsivitsy amin'ny rantsan-tànanao dia ho azonao ny valiny antenainao.
Rehefa mila hafainganana ianao dia hikarakara izy amboary ho azy ny zava-drehetra ho an'ny sary tonga lafatra ao anatin'ny segondra, ary manome anao sivana sy vokany aza hanatsarana ny sarinao, ary koa ny frame mba hanatsarana ny vokatra farany. Ary ny tsara indrindra dia maimaim-poana.
Ity rindranasa ho an'ny Android sy iOS ity dia tena tsara tokoa noho ny katalaogin'ny sivana ananana. Ary, ao anatin'ny segondra vitsy, ny sary rehetra miara-miasa aminao amin'ny fampiharana dia azo avela miaraka amin'ny fikitihana kanto izay ho matihanina.
ihany koa azonao atao ny manangona, manova ny soatoavin'ny sary, manampy ny borosy na ny borosy, ary koa ny sivana sy fomba hafa.
Rindrambaiko fanovana sary tsara indrindra: Adobe Photoshop Express
Tsy toy ny Adobe Photoshop, Ity fampiharana ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny iOS, maimaim-poana, ary ahafahanao manana iray amin'ireo programa fanovana sary miaraka amina asa fototra sy matihanina, ary koa amin'ny sivana sy fiasa hafa izay hampiasainao betsaka rehefa manandrana azy ireo ianao.
Ny hany zavatra ratsy momba ity fampiharana ity dia ny mpampiasa Apple ihany no voafetra, satria tsy misy ho an'ny Android (na Windows).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Ny programa tsara indrindra hanovana sary
Avadiho ho PDF ny sary